EURO 2020: Xulalka Portugal iyo France - Germany iyo Hungary oo gudbay xilli ay bar-bar dhaceen : Calanka.com
Waxaa caawa la soo gabagabeeyey Group-ka F Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2020, iyadoo labada xul France iyo Germany ay kaga soo gudbeen Group-ka F kaalinta koowaad iyo labaad sida ay u kala horeeyaan, halka xulka Portugal uu kaga soo gudbay Group-kan booska saddexaad.
Xulalka Portugal iyo France ayaa ku kala baxay bar-bardhac 2-2 ah, halka sidoo kale xulalka Germany iyo Hungary uu kulankooda ku dhamaaday bar-bardhac 2-2 ah.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada xul Portugal iyo France ku kala nasteen bar-bardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 31-aad xulka qaranka Portugal ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay Cristiano Ronaldo, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 1-0.
45+2 daqiiqo wiilasha xulka France ayaa markooda loo dhigay rigoore waxaana gool ka dhigay Karim Benzema, dheesha ayaa sidaas ku noqotay bar-bardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 48-aad xulka qaranka France ayaa hoggaanka u qabtay ciyaarta waxaana 1-2 ka dhigay Karim Benzema oo caawin kahelay saaxiibkiis Paul Pogba.
Laakiin 60 daqiiqo marka ay dheesha mareysay xulka qaranka Portugal ayaa markale loo dhigay rigoore, waxaana sida caadiga aheyd isku taagay Cristiano Ronaldo oo gool ka dhigay, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay bar-bardhac 2-2 ah.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhammaantay bar-bardhac 2-2 ah ay ku kala baxeen labda xul Portugal iyo France, haddaba xulalka France iyo Germany ayaa kaga soo gudbay Group F kaalinta koowaad iyo labaad sida ay u kala horeeyaan, halka xulka Portugal uu kaga soo gudbay Group-kan booska saddexaad.